Ụdị ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ | e-azụmahịa ozi
Ụdị ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
Ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa n'ịntanetị, otu n'ime ya Ihe kacha mkpa ị ga-eburu n'uche bụ ụzọ ịkwụ ụgwọ. Kpọmkwem, nye ndị ahịa gị akụrụngwa ka ha nwee ike ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa gị. Ma anyị anaghị ezo aka n'inye ha mbelata, ego ego na ịkwụ ụgwọ nkeji, kama inye ha ụdị ugwo dị iche iche na-adaba n'ihe ha nwere ike chọọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụdị ụzọ nkwụnye ụgwọ dị iche iche.
Ọtụtụ oge, ihe kpatara eji hapụ ụgbọ ala ndị ahụ ọkara bụ n'ihi na ndị ọrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe na, mgbe ọ na-abịa n'ịkwụ ụgwọ, nhọrọ ndị a na-enye adịghị eme ka ha kwenye, na ha na-ahọrọ ịga ụlọ ahịa ọzọ, ọbụna na-akwụ ụgwọ ntakịrị. karịa maka ihe ị na-enye, n'ihi na ha nwere usoro ịkwụ ụgwọ dabara adaba. Gịnị ma ị tụlee ihe dị n'ebe ahụ?
1 Kedu ihe bụ ụzọ nkwụnye ụgwọ
2 Ihe kpatara eCommerce kwesịrị iji ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
3 Olee otu ha si aru oru
4 Ụdị ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
4.5 Apple Ṅaa
Kedu ihe bụ ụzọ nkwụnye ụgwọ
Tupu ikwu maka ụdị ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, ị kwesịrị ịma kpọmkwem ihe anyị na-ekwu maka okwu a.
Ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ bụ n'ezie ụzọ inye ikike ịkwụ ụgwọ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ekwe nkwa na onye ọrụ na ugwo ha, na eletrọnịkị azụmahịa azụmahịa na-eme, ziri ezi ma na-echebe maka ha abụọ.
Ọ bụrụ na anyị na-eburu n'uche na oge ọ bụla ndị ọzọ na-eji kaadị akwụmụgwọ, na na enweghi ike iji ya na ntanetị, ihe ị na-eme na eCommerce gị bụ na-enye gị nchebe site n'ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị ahụ ka ị "tụkwasị obi" ya, ka ị mara na ị na-eme ihe na-agaghị etinye gị n'ihe ize ndụ na-ekwesịghị ekwesị.
Ihe kpatara eCommerce kwesịrị iji ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
Ecommerce gị ọ bụ ụlọ ahịa awa 24. Ha nwere ike ịzụta otu ihe ahụ n'aka gị na 3 n'ehihie dị ka elekere 3 nke ụtụtụ, nke ahụ pụtara ịnye ụzọ nkwụnye ụgwọ kwesịrị ekwesị na, karịa ihe niile, na-ekwe nkwa na mmekọrịta azụmahịa.
Mgbe ị na-enye azụmahịa echekwara echekwabara, ihe ị na-egosi ndị ọrụ bụ na ị tinyela nkwa niile kwere omume ka ịzụrụ ha na ụgwọ ha wee bụrụ "echekwara". Ma ọ bụ na nkwado nke ịkwụ ụgwọ ndị a na-eme mgbe niile na ozugbo na ozugbo. Otu ihe ahụ dị ka ma ọ bụrụ na ị ga-emeghachi omume.
Olee otu ha si aru oru
Iji mee ka echiche ahụ doo gị anya, ọrụ nke ụzọ nkwụnye ụgwọ na-amalite n'oge mgbe onye ọrụ rutere na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, hụ ngwaahịa ndị na-amasị ya ma kpebie itinye ha n'ime ụgbọ ala wee malite usoro ịzụrụ. Mgbe ị ruru akụkụ nke ịkwụ ụgwọ, họrọ ụzọ ịkwụ ụgwọ nke ị na-enye ha.
Ọ bụ mgbe ahụ mgbe ụlọ ọrụ gị, na-eji ibe weebụ, nyefee ozi ndị ahịa niile (ma maka arịrịọ gị) gaa n'ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ahụ yabụ ị nwere ike họrọ usoro ịchọrọ.
N'oge ahụ, A na-eme azụmahịa ahụ na ụlọ akụ na ị họrọla iji ụdị sistemụ abụọ zoo data ahụ: SSL o TLS.
Ozugbo ụlọ akụ kwadoro azụmahịa ahụ, ozi ahụ na-ezigara ụlọ ọrụ na-ere ere, ugbua na webụ, ebe a na-enyocha na data ahụ ziri ezi na enwere ike ịnye ikike ịzụta ya.
Ugbu a, ozugbo ụlọ akụ ụlọ ọrụ kwadoro, na-aga site n'ụlọ akụ onye ọrụ ka o wee nyochaa ma nye ikike azụmahịa ahụ. Ọ bụrụ na akwadoro ha abụọ, mgbe ahụ ị ga-aga n'ihu na ịkwụ ụgwọ ozugbo.
Na nke kacha mma, nke a na-eme mgbe niile n'ime ihe nke sekọnd.
Ugbu a na o doro gị anya ihe ụzọ nkwụnye ụgwọ bụ na otu ha si arụ ọrụ, ọ bụ oge iji nyochaa ụdị niile dị. Ma enwere ọtụtụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile ka ejiri ma ọ bụ mara ha. Ụfọdụ bụ ndị kacha eji na Spen.
Paypal bụ otu n'ime ụzọ ámá ochie mana kacha arụ ọrụ nke ọma. Ma ọ bụ na onye ọrụ agaghị enye nkọwa ụlọ akụ ya iji kwụọ ụgwọ, mana ọ na-eme ihe niile site na email.
Nanị nsogbu bụ na ọ bụghị eCommerce niile na-eji ya na ụfọdụ ọbụna mụbaa ọnụahịa nke ịkwụ ụgwọ iji zere ịjinye ha ụgwọ ọrụ PayPal na-ana maka iji ya dịka ụzọ ịkwụ ụgwọ.
Nke a abụghị otu n'ime ndị kasị mara amara na Spain, ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike ịgbanwe n'ime ọnwa ole na ole ma ọ bụ afọ. Usoro ịkwụ ụgwọ gị bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe na azụmahịa ndị ahụ dị nnọọ nchebe, gbakwunyere ihe niile ị ga-eme bụ ịbanye na Amazon ka ị nwee ike iji ya kwụọ ụgwọ.
Banyere eCommerce, ọtụtụ na-emepe usoro a ma ọ gaghị eju anyị anya ma ọ bụrụ na nke nta nke nta ha nwere ya dị ka otu n'ime nyiwe ịkwụ ụgwọ ndabara.
A maara nke ọma na Spain na nke Spanish sitere, bụ otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị eme ihe. N'ime njirimara ya, enwere ike ijikọ ya na kaadị kredit nke mba na nke mba; nwere asambodo maka Visa na Mastercard na Ọ bụ otu n'ime ndị kacha mfe itinye..
Ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ a na-enye gị ohere kwụọ ụgwọ oge ọ bụla, ebe ọ bụla. Ọ nwere ihe karịrị 20 afọ ahụmahụ dị ka ndị dị otú ahụ na bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu. Ọzọkwa, n'adịghị ka ndị ọzọ, nke a ị chọghị ka webụsaịtị nweta asambodo SSL ma ọ bụ na ọ na-akwado PCI iji ya.
Na mgbakwunye, ọ na-ahụ maka ịnyefe ego site na akaụntụ ụlọ akụ, n'ụzọ dị otú ahụ na ihe niile na-akpaghị aka na ị na-ezere igbu oge.
Maka ndị ọrụ Apple, nke a nwere ike ịbụ otu n'ime nhọrọ ndị a ga-atụle maka ịkwụ ụgwọ. Ma ọ bụ nke a catwalk jiri ID ihu na Touch ID iji kwado ịkwụ ụgwọ ahụ.
ee, na azụmahịa gị ị ga-enwerịrị ọnụ na NFC, ma ọ bụghị na ị gaghị enwe ike iji ya kwụọ ụgwọ. Ihe dị mma bụ na nchekwa kachasị na usoro a, ọ bụ ezie na n'eziokwu ọtụtụ ụlọ ọrụ achọpụtabeghị ya.
Ọ bụ nke kacha mara amara, nwee ike iji ọpịpị zụta ihe n'ọnụ ọgụgụ nke kaadị ọ na-anabata.
Naanị nsogbu ị nwere bụ ịnata ụgwọ ahụ ọ nwere ike were ụbọchị 7-14, nke, maka SMEs na freelancers, nwere ike ọ gaghị abụ nke kacha mma maka azụmahịa gị.
nyiwe ndị ọzọ dị ka Square, MercadoPago, PayPro Global, FONDY, Swipe ma ọ bụ Payment Sense bụkwa ihe atụ nke ụdị ụzọ ịkwụ ụgwọ ga-atụle.
Nke kacha mma n'ime ha? Ọ ga-adabere na mmefu ego gị yana ihe ịchọrọ maka eCommerce gị. Ọ ga-ekwe omume iji ọtụtụ n'otu oge, na-ekwe nkwa ọtụtụ ụdị maka ndị ahịa gị. Ihe niile doro gị anya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụdị ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
Gịnị bụ logistics center
5 Uru na uru nke nhazi SEM